Fizahantany Thai mba hampihenana ny tsy fitoviana ara-toekarena sy ara-tsosialy
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fizahantany Thai mba hampihenana ny tsy fitoviana ara-toekarena sy ara-tsosialy
Associations News • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Travel Wire News
Ny manampahefana misahana ny fizahan-tany any Thailand (TAT) dia namoaka drafi-panatanterahana ho an'ny taona 2019 izay hikasa ny hitarika ny fitsidihan'ny mpitsidika any amin'ireo faritany izay misy dia tsy latsaky ny efatra tapitrisa isan-taona, hanamaivanana ny fiatraikany ratsy eo amin'ny fizahan-tany, ary hanatsara ny fahasambarana eo amin'ny pe Thai
Ny manampahefana misahana ny fizahan-tany any Thailand (TAT) dia namoaka drafi-panatanterahana ho an'ny taona 2019 izay hikasa ny hitarika ny fikorianan'ny mpitsidika any amin'ny faritany izay misy dia tsy latsaky ny efatra tapitrisa isan-taona, hanamaivanana ny fiatraikany ratsy eo amin'ny fizahan-tany, ary hanatsara ny fahasambarana eo amin'ny vahoaka Thai.
Andriamatoa Yuthasak Supasorn, governoran'ny TAT, dia nilaza tamin'ny valan-dresaka ho an'ny TAT Marketing Action Plan 2019 fa ireo no fanamby lehibe amin'ny 2019, satria ny TAT dia mitady handanjalanja tsara ny sandan'ny toekarena amin'ny fahatongavan'ireo mpitsidika miditra miaraka amin'ireo fiantraikany ara-tsosialy sy ara-kolontsaina ary ny tontolo iainana. ny fitomboan'ny fizahantany.
Nambarany fa ny fitazonana ny fizahan-tany miditra dia mila tazonina fa harahi-maso akaiky mba hahafahana manitsy ny paikady mifanaraka amin'ny fironana ara-toekarena.
Hifantoka bebe kokoa amin'ny tsena lavitra i Thailand mba hanefana ny risika, hifantoka akaiky kokoa amin'ny ampahan'ny mpanjifa manokana ary hanara-maso ny fiovan'ny fitondran-tena sy ny fironana amin'ny fangatahana. Mila mampiasa tsara kokoa ny teknolojia nomerika ihany koa izy, indrindra ireo fotoana naroson'ny Big Data, hitazomana ny fitarihany eo amin'ny tsena.